Egwuregwu Social Media: Kedu ihe bụ nyiwe Social Media kachasị na 2020? | Martech Zone
Size dị mkpa ma anyị ga-achọ ikweta ya ma ọ bụ. Ọ bụ ezie na abụghị m onye kachasị mmasị na ọtụtụ netwọkụ ndị a, ka m na-ele mmekọrịta mụ na ha - nyiwe kachasị na- ebe m na-anọ oge m. Ewu ewu na-eme ka ndị mmadụ sonyere m, ma mgbe m chọrọ iru netwọkụ mmekọrịta m dị, ọ bụ nyiwe ndị ama ama ebe m nwere ike iru ha.
Rịba ama na m kwuru dị.
Agaghị m enye onye ahịa ma ọ bụ mmadụ ndụmọdụ ka o leghara obere nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta pere mpe ma ọ bụ nke ọhụụ. Ọtụtụ mgbe, obere netwọkụ nwere ike inye gị ohere ibili n'ọkwa ma wuo ndị na-eso ngwa ngwa. Obere netwọk enweghi oke asọmpi! Ihe egwu dị na ya bụ na netwọkụ nwere ike mechaa daa - mana ọbụlagodi ị nwere ike ịkwanye ọhụụ ọhụrụ gị na netwọkụ ọzọ ma ọ bụ mee ka ha denye aha na email.
Nakwa, Agaghị m adụ onye ahịa ma ọ bụ onye ọ bụla ọdụ ka ọ leghara nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta ọhaneze anya. Dịka ọmụmaatụ, LinkedIn ka bụ onye na-eduzi ndị na-eduzi na ozi maka m kemgbe m na-azụ ahịa. Dị ka nyiwe dị ka Facebook na-ewetu ọdịnaya azụmaahịa na-agagharị na kwuo ugwo obibia maka ego ha nwetara, LinkedIn na aru elu networking ya na ike ya.
Social media abanyewo n'ime ihe niile gbasara ndụ oge a. Egwuregwu mgbasa ozi ọha na eze na-ejikọ ugbu a 3.8 ijeri ọrụ, na-anọchi anya Olee ihe enyemaka 50% nke ọnụ ọgụgụ ụwa. Na otu ọzọ ijeri Ndị ọrụ ịntanetị ga-abịa n'ịntanetị na afọ ndị na-abịanụ, ọ ga-ekwe omume na eluigwe na ụwa na-elekọta mmadụ nwere ike ịgbasa ọbụna n'ihu.
Nick Routley, Onye Na-ahụ Ihe Anya
Nke ahụ kwuru, ọ dị mma mgbe niile ịdebe taabụ na ihe na-eme na mgbasa ozi mgbasa ozi! Ihe omuma a sitere na Visual Capitalist, Egwuregwu Social Media nke 202, na-enye nnukwu echiche dị na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta na mbara ụwa. Ma lee ha:
n'usoro Social Network MAUs na Nde Mba onye si
#4 ozi 1,300 US
#20 tuwichi 140 US
Ọ dịkwa mkpa iburu n’obi na a onye ọrụ kwa ọnwa abụghị onye dị otu onye. Ọtụtụ n'ime nyiwe ndị a nwere akụkọ na-arụ ọrụ na-akpali ha ọdịnaya. N'uche m, nke a egbochitere ogo nke mmekọrịta nke ụfọdụ nyiwe. Twitter, IMO, emetụtala nke kachasị njọ ma na-emecha mata na ọ dị njọ ma na-ehichapụ akaụntụ bot na-aga n'ihu. Ọzọkwa, Facebook amalitela ịsachapụ ibe arụmụka site na ikpo okwu ya iji melite ogo mkparịta ụka yana belata ohere nke ịkekọrịta na ịkwalite akụkọ na-adịghị mma
Tags: 2020Baiduafọ ọhụrụdoyinFacebookonye ozi facebookinstagramakaraLinkedInchọrọozindị ọrụ kwa ọnwa na-arụ ọrụPinterestqqRedditsnapchatelekọta mmadụ mediaọhaneze mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozindị na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụtelegramtiebaTwittervibervkwechatweibowhatsappyoutubeyympaghara